Ithegi: iiroundpeg | Martech Zone
Iphepha lomsebenzi: Ukuthengisa ngaphakathi kungenziwa kwalula
NgoMgqibelo, Novemba 9, 2013 NgeCawa, ngo-Novemba 17, 2013 Lorraine Ibhola
Kanye xa ucinga ukuba unesiphatho kule nto yentengiso ye-intanethi, indawo entsha ye-buzz. Okwangoku, ukuThengisa okungaphakathi kwenza ujikelezo. Wonke umntu uthetha ngayo, kodwa yintoni, uqala njani, kwaye ziphi izixhobo ozifunayo? Intengiso engenayo iqala ngolwazi lwasimahla, olunikezelwa ngeendlela zentlalo, ukukhangela, okanye intengiso ehlawulelweyo. Injongo kukukhulisa umdla wethemba kwaye ubenze bathengise
NgoLwesihlanu, Septemba 10, 2010 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 UNick Carter
Kwiiveki ezimbalwa emva, ndibhale inqaku 1 kuthotho lwentengiso yedriphu: Ngubani Okhathalayo? Eyona nto, enyanisweni, yajika yaba linqaku malunga nendlela yokwenza izikhokelo. Inoveli umbono, akunjalo? Ngaphambi kokuba uthontsize, kufuneka ube nabaphulaphuli ukuba uthontsize. Ewe, ukuba loo nto ibonakala ngathi ayisebenzi kuwe, yeka ukufunda ngoku. Ingcebiso yam kule veki: sukuncancisa.
Yiba nguMkhiqizo woKhetho
NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2010 NgoMgqibelo, Novemba 28, 2015 Lorraine Ibhola
Kwiposti yamva nje, uSeth Godin ubuze umbuzo obalulekileyo ndicinga ukuba wonke umnini-shishini kufuneka aphendule: Kutheni Nawe? Kutheni Ngoku? Masijongane nodidi lweemveliso, kodwa ngokuqinisekileyo kwiinkonzo ze-intanethi sinokukhetha. Xa kuziwa kubanikezeli nge-imeyile, imikhosi yewebhu, kunye nesoftware yokulawulwa kobudlelwane nabathengi, umnini weshishini onobuchule kufuneka abuze isibonelelo esinokubakho: Ngokukhetha okuninzi, kutheni kufanele ndikhethe wena? Ukuqala kwam ishishini
Ukufunda iposti kaDoug kwandenza ndacinga ngazo zonke izicelo endixhomekeke kuzo njengenxalenye yendlela endiliqhuba ngayo ishishini lam nobomi bam. Iqela, iTungle kunye neDropbox, uDoug sele ekhankanyiwe. Kodwa nolu uluhlu lwabambalwa endingenakubucinga ngobomi ngaphandle kweWebNotes- Eli yinxalenye ebalulekileyo yophando lwam lwewebhu. Nokuba ndizama ukufumana ulwazi ngeprojekthi yabathengi, inkuthazo